लचिलो तामा भल्भ किन छनौट गर्नुहोस्? - Yuhuan गोल्डन-पत्ता भल्भ निर्माण कं, लिमिटेड
१. सुविधाजनक स्थापना (पहिले पाइप वा कच्चा टेपको थ्रेडेड जडानमा गाढा सेतो पेन्ट लागू गर्नुहोस् वाल्भको युनियन नटलाई बाहिर तान्न र सिधै पानीको पाइपमा स्क्रु गर्नुहोस्)
२. डिसएस्सेम्बल गर्न सजिलो (नजिकका भागहरू वा पाइपलाइनहरू छुट्टिनु आवश्यक पर्दैन, सिधा वाल्भको नटलाई पेच पार्नुहोस्)
Tale. प्रतिभा र अंशहरू बचत गर्दै (मिलान तार, यूनियन फिटिंग, पानी पाइप, आदि तयारी गर्न आवश्यक छैन)।
Time. समय बचत र श्रम-बचत (किनकि भल्भ र भल्भ शरीरको मिलन नललाई सिल स्लाइडिंग आस्तीनले जोडेको छ, पानी पाइपको जडानको क्रममा केही आन्दोलनहरू गर्न सकिन्छ, र भल्भको मुख्य शरीर) चालित हुने छैन। तसर्थ, भित्ता र मैदानको नजिक यो पाइपलाइन खालको सानो दूरी द्वारा सीमित हुनेछ। स्थापनाको समयमा, गेट वाल्भको ह्यान्डविल र बल भल्भको ह्यान्डल बिच्छेदन गर्न आवश्यक पर्दैन, र कुनै स्पेयर पार्ट्सको आवश्यक पर्दैन। प्रतिस्थापन भल्भ हटाउने वा मर्मत गर्दा, छेउछाउको पाइपलाइन काट्ने वा बिच्छेद गर्न आवश्यक छैन।
कपरको मानले दुबै छेउमा आन्तरिक रिब स्क्रु जोड्ने भाल्व समावेश गर्दछ, भल्भ युनियन नट र भल्भ शरीर सिलि se स्लाइडिंग स्लीभ द्वारा एकसाथ जोडेको छ, र उच्च तापमान प्रतिरोधी सीलिंग रिंग निश्चित रूपमा अखरोटमा स्थापित छ, र कनेक्टि slee स्लीभ तामाको मान र बदामलाई घटाउने प्रकार हो, दुबै छेउमा मिलन नटहरू सिधै पानीको पाइपमा पेच गरिन्छ, र अधिक पेच गरिएको छ, अधिक छाप छ।